Imimmiselo yokusebenzisa | component-xh.com
Ibephakathi - Microcontrollers
PMIC - Voltage migqaliselo - Linear
PMIC - Iisuphavayiza
Clock / ixesha - Specific Application
Ibephakathi - Microprocessors
PMIC - Gate Abaqhubi
Abaqhubi LED - PMIC
Aplikheyishini yokwenziwa kwemiYalezo - ezizodwa
Linear - yokukhulisa - Audio
PMIC - Motor Abaqhubi, izilawuli
Aplikheyishini yokwenziwa kwemiYalezo - Telecom
Aplikheyishini yokwenziwa kwemiYalezo - izilawuli
Logic - Abaguquleli, Level Shifters
Efakelweyo - System On Chip (SOC)
PMIC - Hot izilawuli Tshintsha
Logic - zokubala, Izahluli
Clock / ixesha - Real Time Clocks
Iirejista Shift - Logic
Logic - okukhethekile Logic
Dinga uncedo?Qhagamshelana nathi
Khangela uMvelisi »Bhrawuza kuDidi lweMveliso »Iimveliso ezintsha »
Sele uyayazi inombolo yenxalenye?
1. IPropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Inkonzo, iSiza, kunye nalo lonke ulwazi kunye / okanye umxholo owubonayo, owuvayo okanye onamava kuwo kwiSiza ('isiQinisekiso') sikhuselwe yi-China kunye nelungelo lokushicilela, uphawu kunye neminye imithetho, kwaye zezikaCandelo-en. com okanye umzali wayo, amaqabane, abaxhasi, abanikeli okanye umntu wesithathu.Component-en.com ikunika ilayisensi yobuqu, engenakudluliselwa, nelayisensi engabalulekanga yokusebenzisa iSiza, iNkonzo kunye noMxholo ukuprinta, ukukhuphela kunye nokugcina iinxalenye Umxholo owukhethayo, ngaphandle kokuba: (1) usebenzise ezi kopi zoMxholo kwiinjongo zeshishini lakho lwangaphakathi okanye wena, ungasebenzisi ukuthengisa; (2) musa ukukopa okanye ukuthumela umxholo kuyo nayiphi na ikhompyutha yenethiwekhi okanye usasaze, usasaze, okanye usasaze uMxholo kuyo nayiphi na imidiya; (3) musa ukuguqula okanye ukuguqula umxholo nangayiphi na indlela, okanye ucime okanye utshintshe nasiphi na ilungelo lobunikazi okanye uphawu lwentengiso. Akukho lungelo, isihloko okanye umdla kuyo nayiphi na into ekhutshelweyo okanye izinto ezikhutshelweyo ezithunyelwa kuwe ngenxa yelayisensi. IComponent-en.com igcina isihloko esipheleleyo kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kuyo nayiphi na iMixholo oyikhuphelayo kwiSayithi, ngokuxhomekeke kulo mvume ilinganiselweyo yokuba uzisebenzise ngokwakho iziqulatho njengoko kubekiwe apha. Awunakho ukusebenzisa naluphi na uphawu okanye iilogo ezibonakala kuyo yonke le ndawo ngaphandle kwemvume ebhaliweyo evela kumnini wophawu lwentengiso, ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngumthetho ofanelekileyo. Awunakho ukwenza isipili, ukukrwela, okanye ukubiyela iphepha lasekhaya okanye nawaphi na amanye amaphepha ale ndawo nakweyiphi na iwebhusayithi okanye iphepha lewebhu. Awunakho ukudibanisa 'amakhonkco anzulu' kwiSiza, okt, yenza amakhonkco kule ndawo idlula iphepha lasekhaya okanye ezinye iinxalenye zeSayithi ngaphandle kwemvume ebhaliweyo.
2. Isibhengezo kwiiWaranti.
IComponent-en.com ayithethi ngokucacileyo, iwaranti echaziweyo okanye ukumelwa ngokubhekisele kuyo nayiphi na imveliso, okanye ngokubhekisele kwindawo, inkonzo okanye umxholo. IComponent-en.com iyazichaza ngokucacileyo zonke iiwaranti zalo naluphi na uhlobo, zichaze, zichaziweyo, zisemthethweni okanye kungenjalo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iziqinisekiso ezichaziweyo zokurhweba, ukulungela injongo ethile, isihloko kunye nokungabikho kolwaphulo-mthetho ngokubhekisele kwiimveliso, indawo, inkonzo, kunye nomxholo.Component-en.com ayiqinisekisi ukuba yeyiphi imisebenzi eyenziwa yile ndawo okanye inkonzo ayizukuphazanyiswa, ngexesha elifanelekileyo, ikhuselekile okanye ingenazimpazamo, okanye iziphene kwindawo okanye inkonzo iya kuba ukulungiswa.Component-en.com akuqinisekisi ukuchaneka okanye ukugqibelela komxholo, okanye ukuba naziphi na iimpazamo kumxholo ziya kulungiswa. Indawo, inkonzo kunye nomxholo zibonelelwa 'Njengokuba kunjalo' kwaye 'njengoko zifumaneka'.
KwiComponent-en.com, iindwendwe zeedilesi ze-IP zihlaziywa rhoqo kwaye zihlalutywe ngenjongo yokubeka iliso, kunye nokuphucula ngokufanelekileyo iwebhusayithi yethu kuphela, kwaye azizokwabiwa ngaphandle kweComponent-en.com.
Ngexesha lotyelelo lwewebhu, sinokukucela ukuba ufumane iinkcukacha zonxibelelwano (idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, inombolo yefeksi kunye needilesi zokuhambisa / zokuhlawula) .Lolu lwazi luqokelelwa ngokuzithandela-kwaye ngemvume yakho kuphela.
3. Umda woXanduva.
Akukho mcimbi apho iComponent-en.com iya kuba noxanduva kumthengi okanye kuye nawuphi na umntu wesithathu ngayo nayiphi na into engangqalanga, engalindelekanga, ekhethekileyo, enesiphumo, isohlwayo okanye umzekelo ongumonakalo (kubandakanya ngaphandle komda wenzuzo elahlekileyo, ukonga okulahlekileyo, okanye ukulahleka kwamathuba eshishini) evela ngaphandle okanye ngokunxulumene (I) Nawuphi na umkhiqizo okanye inkonzo enika okanye enokunikezelwa yiComponent-en.com, okanye ukusetyenziswa kokungakwazi ukusebenzisa okufanayo; (II) Ukusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa indawo, inkonzo, okanye umxholo, (III) Nakuphi na ukuthengiselana okwenziwe okanye okuququzelelwa sisiza; (IV) Naliphina ibango elibangelwe ziimpazamo, ushiyelelwano, okanye ezinye izinto ezingachanekanga kwindawo leyo, inkonzo kunye / okanye umxholo; (V) Ukufikelela okungagunyaziswanga okanye Imfonomfono yothumelo lwakho okanye idatha, (VI) Iingxelo okanye indlela yokuziphatha yomntu wesithathu kule ndawo okanye kwinkonzo; (VII) Nawuphi na omnye umcimbi onxulumene neemveliso, indawo, inkonzo okanye umxholo, nokuba yiComponent-en. com uye wacetyiswa malunga nokwenzeka kolo monakalo.
IComponent-en.com yimbopheleleko yodwa kunye noxanduva lweziphene zemveliso, kuya kuba kukhetho lweComponent-en.com, ukuyibuyisela endaweni loo mveliso inesiphene okanye ukubuyiselwa kwemali kubathengi isixa esihlawulwe ngumthengi ke ngenxa yoko akukho mcimbi uza kuba noxanduva lweComponent-en.com Ixabiso lokuthenga lomthengi. Unyango olukhankanyiweyo luya kuxhomekeka kumthengi ngesaziso esibhaliweyo sesiphene kunye nokubuya kwemveliso enesiphene zingaphelanga iintsuku ezingamashumi amathandathu (60) zokuthengwa. Eliyeza lingentla alisebenzi kwiimveliso ebezisetyenziswe gwenxa (kubandakanya ngaphandle komda wokukhutshelwa okungagungqiyo), ukungahoywa, ingozi okanye uhlengahlengiso, okanye iimveliso ezithengisiweyo okanye ezitshintshiweyo ngexesha lendibano, okanye kungenjalo azikwazi kuvavanywa. Ukuba awanelisekanga yile ndawo, inkonzo, umxholo, okanye imigaqo yosetyenziso, olona nyango lwakho kukuphela kokuyeka ukusebenzisa le ndawo. Uyavuma, ngokusebenzisa kwakho indawo leyo, ukuba ukusebenzisa kwakho le ndawo kumngcipheko wakho kuphela.
KwiSekethe Integrated (ICS)
Evelele semiconductor Products
Inductors, okuzingela, ingakwazi nokuginya
Iimveliso ezenziwe ngu-AZ
Uhlaziyo lwemihla ngemihla
Iminyaka eli-15 ijolise kwiiNxalenye ze-Elektroniki